प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा मत दिन नपाउने शीर्ष नेता: - आयो खबर
प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा मत दिन नपाउने शीर्ष नेता:
२०७४ मंसिर २० प्रकाशित ०६:४२
भोलि हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा केही शीर्ष नेताले आफूलाई मत दिन पाउनेछैनन्। आजको नयाँ पत्रिकामा रमेश सापकोटाले लेखेका छन्।
केपी ओली र माधव नेपाल
एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले आफैँलाई मत हाल्न नपाउने भएका छन् । उनी झापा ५ का उम्मेदवार हुन् । तर, ओलीको मतदाता नामावली भक्तपुर सूर्यविनायक नगरपालिका–२ मा छ । एमाले नेता माधव नेपाल काठमाडौं २ बाट उम्मेदवार बनेका छन् । तर, उनको मतदाता नामावली रौतहटमा छ । उनले गौर नगरपालिकाको रामजानकी केन्द्रबाट मतदान गर्दै आएका छन् ।
प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवापत्नी आरजु राणा देउवा कैलाली ५ बाट उम्मेदवार बनेकी छिन् । उनको मतदाता नामावली डडेल्धुरामा छ । कैलाली कांग्रेस सभापति नरनारायण शाहका अनुसार बुथमा घुम्नुपर्ने भएकाले देउवा मत हाल्न डडेल्धुरा जाने छैनन् । भक्तपुर २ का कांग्रेस उम्मेदवार दमननाथ ढुंगानाले स्थानीय निर्वाचनमा काठमाडौं २ बाट मत हालेका थिए । मोरङ–२ का कांग्रेस उम्मेदवार डा. मीनेन्द्र रिजालले पनि आफैँलाई भोट दिन पाउनेछैनन् । उनी विराटनगर महानगरपालिका–१ अर्थात् निर्वाचन ४ का मतदाता हुन् । मोरङ–५ का कांग्रेस उम्मेदवार अमृत अर्यालको मतदाता सूची क्षेत्र नम्बर ४ मा भएकाले उनले आफैँलाई मत दिन पाउने छैनन् ।
संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पनि आफैँलाई भोट दिन पाउने छैनन् । उनी सप्तरी २ का उम्मेदवार हुन् । यादवको मतदाता सूची मोरङ विराटनगर महानगरपालिका–१४ जतुवामा छ ।
प्रकाशित | २०७४ मंसिर २० प्रकाशित ०६:४२
विश्वकप हेर्न पुगेका क्रोएसियाली समर्थक बाटैबाट फर्काइए, फाइनलको एउटा टिकटको मूल्य कति ?
तिहार मनाउन उपराष्ट्रपति पुन पुग्नु भयो पुर्ख्यौली घर
नेकपा प्रबक्ता विश्वकर्मालाई २४ घण्टाभित्र हाजिर गराउन सर्वोच्चको आदेश